Diyaaraddo duqeyn ka geystay deegaanno ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta dalka
04-17-2017, 10:18 AM
Diyaaraddo dagaal ayaa duqeeyay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo,waxaana duqeynta lugu beegsaday saldhiga ay al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka,sida laga soo xigtay goobjoogayaal.
Dhowr gantaal ayaa ku dhacay deegaan ku yaalla duleedka Ceel-cadde,halka oo la sheegay inay saldhig ku leeyihiin ururka al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya la-dagaallama.
“Holoc ayaan aragnay,waxaana ka hor maqalnay jogta ilaa saddex gantaal oo ku dhacay dhul aan ka fogeyn deegaanka Ceel-cadde”. ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay Raxanreeb.
Duqeynta ilaa hadda lama xaqiijin khaasaraha ka dhashay,waxaana warar madax banaan ay sheegayaan diyaaraddo dagaal oo ay leedahay dowladda Kenya inay fuliyeen.
Ururka al-Shabaab oo maamulla deegaannada ku dhow Ceel-cadde ma jiro war ay uga hadleen duqeynta la sheegay in lugu beegsaday saldhig ku yaalla deegaanka.
Deegaanka duqeynta laga fuliyay horey waxaaa deganaa ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabadeynta Soomaaliya ee AMISOM,waxaase saldhigya ay isaga gureen mirkii weerar culus ay ku qaaden ururka al-Shabaab,marka askar ka badan boqol ayaa laga dilay ciidanka Kenya.
Duqeynta ayaa lugu soo aadiyay xilli dowladda Faderaalka ay u qabatay al-Shabaab dalka in looga saarayo muddo labo sanno ah,waxaa kalo gaaray magaalada Muqdisho ciidamo ka socda Marekanka oo la sheegay howlgalka inay xoojinayaan
Current time: 10-23-2018, 02:23 PM Powered By MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.